kohtuusann's Likes - Myanmar Network
Back to kohtuusann's Page
အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါ … ဘာသာစကားတစ်ခုဟာစကားလုံး (word) တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ၊ အဲဒီစကားလုံးတွေ ကိုစုပေါင်းပြီးအသံထွက်ပြောလိုက်တဲ့အခါ Spaeking ဖြစ်လာတယ်၊ အဲဒီအသံကိုနားထောင်လိုက် တာက Listening ပေါ့၊ အဲဒီစကားလုံးတွေကိုပဲချေ… Discussion အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုလေ့လာတဲ့အခါ … 40 Likes ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားစုများ ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသောအင်္ဂလိပ်စကားစုများ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို အင်္ဂလိပ်စကားတတ်ရင် အပြင်ထွက်ပြီး ဈေးဝယ်လို့ရတတ်ပါတယ်။ စကားမတတ်လည်း ၀ယ်ချင်တဲ့ပစ္စည်းကို လက်ညှိးထိုးပြပြီး ၀ယ်လို့ရပေမယ့် အောက်မှာဖော်ပြထာ… Discussion ဈေးဝယ်သည့်အခါအသုံးများသော အင်္ဂလိပ်စကားစုများ 97 Likes
အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၇) ၁၆ after (preposition)ပြီးနောက် (၀ိဘတ်) ; afterwards (adverb) ထို့နောက် (ကြိယာဝိသေသန) After သည် ၀ိဘတ်ဖြစ်သည်။ သူ့နောက်မှ နာမ်ဖြစ်စေ၊ ving ပုံစံဖြစ်စေလိုက်နိုင်သည်။ We ate inarestaurant after t… Discussion အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး (၇) 20 Likes
အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာအသုံး (၃) 12 Adverbs of manner (အမူအယာပြကြိယာဝိသေသနများ) ၁။ Adverbs of manner သည် အရာဝတ္ထုများ (how) မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်သည်ကို ပြသည့်စကား လုံးများဖြစ်သည်။ ဥပမာ: happily, quickly, terribly, beautifully, badl… Discussion အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာအသုံး (၃) 38 Likes စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာအရေးအသားပိုမိုကေ… စီးပွားရေးလောကမှာ စာရေးခြင်းဟာ စံသတ်မှတ်ချက်တွေ၊ စိန်ခေါ်မှုတွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်တွဲ ဆက်စပ်နေတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကုမ္ပဏီတစ်ခုခု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စာတစ်စောင်ကို ပြ… Discussion စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စာအရေးအသားပိုမိုကေ… 53 Likes စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲအားလုံးနီးပါးလိုပင် လျှောက်ထားသူ၏ အရေးစွမ်းရည်ကိုသာမက ကျိုးသင့်ကြောင်းသင့်ရှင်းပြနိုင်စွမ်း၊ တစ်ဖက်သားအား မိမိတင်ပြလိုသည်ကို စွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းကို တစ်ပြိုင်တည်းစစ်ဆေးနိုင်သည့်… Discussion စည်းရုံးသိမ်းသွင်း စာစီစာကုံးရေးသားနည်း 58 Likes
လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန… [Zawgyi]လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်များ (Rights and Responsibilities at Work) သင်အလုပ်စ၀င်နေပါပြီလား? ဒီလိုဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာ သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုလိ… Discussion လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန… 66 Likes နေ့စဉ်သုံးအီဒီယမ်များအပိုင်း - (၅) to shake hand : လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်။ - When people meet for the first time, they usually shake hands. လူတွေ ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့တဲ့အခါ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက် လေ့ရှိကြတယ်။ - The student warmly shook h… Discussion နေ့စဉ်သုံးအီဒီယမ်များအပိုင်း - (၅) 49 Likes အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း… [Zawgyi]အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း (Describing Trends in English) စီးပွားရေးအကြောင်း အင်္ဂလိပ်လိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါမှာ ကုန်သွယ်ရေး (business) နှင့် စီးပွားရေး (economy)၊ အလားအလားများ (t… Discussion အလားအလာများကို အင်္ဂလိပ်စကားဖြင့် ဖော်ပြခြင်း… 65 Likes ပြောနည်း၁၀၀ အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြော အပိုင… 19. ASK FOR ADDITIONAL INFORMATION (အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် တောင်းဆိုခြင်း) May we have? May we have further details? နောက်ထပ်အသေးစိတ်တွေများ ရနိုင်မလား။ Could you elaborate on? Could you elabor… Discussion ပြောနည်း၁၀၀ အခန့်သုံး/အရပ်သုံးစကားပြော အပိုင… 43 Likes
Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် Pronunciation Symbols (အသံထွက်သင်္ကေတများ) အသံထွက်သင်္ကေတများကို 1. Vowel sounds a) Short Vowels b) Long Vowels 2. Diphthongs 3. Consonant sounds ဟူ၍ အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်အဆင့်ခွဲထားပါသည်။ (1)… Discussion Phonetic အသံထွက် ဖတ်နည်းလမ်းညွှန် 31 Likes ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၁ဝ (Che… ဆံစမှ ခြေဖျားအထိ ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းများတွင် ယခုတစ်ပတ်အတွက် ပါး (Cheek) နှင့် ပတ်သက်သော ဝေါဟာရ အသုံးအနှုန်းများကို ဆက်လက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။ Cheek (n) = ပါး/ ပါးမို့မို့။ The tears ran down her cheeks. (မ… Discussion ဆံစ မှ ခြေဖျားထိ ဝေါဟာရများ အပိုင်း- ၁ဝ (Che… 33 Likes
အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ( Guide… အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ( Guide to the English Dictionary ) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူနေကြသောသူများအတွက် အဘိဓာန်(Dictionary) သည်မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပါသည်။ ကျောင်းသား၊ ကျော… Discussion အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် ( Guide… 26 Likes
နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်စကား (International En… နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်စကားသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ် တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်စကားသည် ဒေသအလိုက် အသံထွက်ပုံ(dialects)အမျိုးမျိုးန… Discussion နိုင်ငံတကာသုံး အင်္ဂလိပ်စကား (International En… 67 Likes ဆရာတွေအကြောင်း ဆရာတွေအကြောင်း … ရေးသားသူ - - ခင်နှင်းစိုး လူတွေဟာ သူတို့စိတ်ဓါတ်ပေါ် မူတည်ပြီး ပြောဆို ဆက်ဆံ ပြုမူတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မလုပ်သက် ဆယ့်သုံးနှစ်ကျော်မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့တယ်။ စည်းကမ်းမဲ… Discussion ဆရာတွေအကြောင်း 43 Likes
မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်စာ မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်စာ ရေးသူ - ခင်နှင်းစိုး ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအများအပြားနှင့် ယခင်ကထက် ပိုမို ထိတွေ့ ဆက်ဆံလာသည်။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ အများအပြား မြန်မာနိုင်ငံသို ၀… Discussion မြန်မာ့အနာဂတ်အတွက် ကမ္ဘာသုံး အင်္ဂလိပ်စာ 113 Likes
အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Minu… Justaminute (ခဏလေးစောင့်ပါ) You say justaminute when you want someone to wait foravery short time:ခဏလေးစောင့်ပါ justaminute ကို တစ်စုံတစ်ယောက်အား အချိန်အနည်းငယ် စောင့်စေလိုသောအခါ အသုံးပြုပါ… Discussion အသုံးဝင်သော အင်္ဂလိပ်စကားအသုံးအနှုန်းများ (Minu… 126 Likes